ကျွန်တော်နဲ့ မော်ဒယ်လ်မလေး ၀င့်ယမှုံလှိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » ကျွန်တော်နဲ့ မော်ဒယ်လ်မလေး ၀င့်ယမှုံလှိုင်	18
ကျွန်တော်နဲ့ မော်ဒယ်လ်မလေး ၀င့်ယမှုံလှိုင်
Posted by အောင် မိုးသူ on May 13, 2015 in Photography, Travel | 18 comments
Isola Floral Shop နဲ့ ရေစက်က မပြတ်သေးပါဘူး။ ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့ မိန်းကလေး ဖန်စီအိကျီ င်္အတွက် ၀င့်ယမှုံလှိုင်ကို ငှားပါတယ်။ ရိုက်ကွင်းကတော့ Isola Floral Shop မှာပေါ့။ ရိုက်မယ့် ဓာတ်ပုံဆရာက ဆရာမင်းခန့်ကျော် (Excellent) ပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ Photo Making သာသာပါ။ ကိုယ်ကြိုက်တာလေးလည်း လိုက်ရိုက်ရင်းပေါ့။ ဆရာမင်းခန့်ကျော်က ရိုက်နေပြီဆို ကျွန်တော်က သူတို့နဲ့လွတ်တဲ့ဘက်ကနေ ရသလောက် ၀င့်ယမှုံလှိုင်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ယူမိနေပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါလေးတွေက အခုတော့ အမှတ်တရလေးတွေပေါ့။ အဲသည်တုန်းက ဆရာမင်းခန့်ကျော်ဟာ ကျွန်တော့်ကို သူ့ဆီမှာ ဓာတ်ပုံပညာကို သင်ဖို့ အလုပ်က Brand Manager ကိုပြောပါတယ်။ အလုပ်က ကင်မရာသာယူခဲ့ဖို့ ကျွန်တော့်ကို သင်တန်းကြေးမယူဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့။
သည်လိုနဲ့ သူဌေးနဲ့စကားပြောဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော် Graphic အတွက် တာဝန်ယူရတာ Brand သုံးခုပါ။ အခုနောက်ထပ် Jeans Brand အသစ်အတွက် ကြယ်သီးဒီဇိုင်းကအစ လယ်သာပတ်ကအဆုံး စတစ်ကာဒီဇိုင်းကအစ ဆွဲပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော့်ကို သင်ဖို့အချိန်မပေးခဲ့ပါဘူး။ အဲသည် အခွင့်အရေးကို တွေးတိုင်းနှမြောမိခဲ့ရပါတယ်။
အခု ၀င့်ယမှုံလှိုင်ရဲ့ပုံလေးတွေ ပြန်ကြည့်မိတော့လည်း။ အဲသည် နှမြောစိတ်ဟာ ပြန်လည်ပူနွေးလာပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့်မှာ အခွင့်အရေးရှိသေးတယ်လို့ပဲမှတ်ယူထားလိုက်ပါတယ်။
သူက အရမ်း Cute လုပ်တယ်။
ဦးကြောင်ကြီး says: ဝင့်ယမှုံလှိုင်
ခင်ဇော် says: အာ့ မော်ဒယ်(လ) လားးး
ပန်းတွေလောက် သဘာဝ မဆန်ဘူးးး
ဓာတ်ပုံက ကဗျာဆန်ပြီး သူက ကဗျာမဆန်ဘူးးး
နိ က ငယ်သလောက် အရည်အချင်းတွေ အများကြီးရှိတယ်။
အောင် မိုးသူ says: သူက MRTV-4 ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ သရုပ်ဆောင်တဲ့သူပါ။ သိပ်နာမည်မကြီးဘူး။ တတ်သလောက် မှတ်သလောက်ပါ မကြီးရေ။ အရည်အချင်း မပြည့်ဝသေးပါဘူး။
Crystalline says: လွတ်တဲ့နေရာကရိုက်ရတာတောင် ဂလောက်အဆင်ပြေတာ.. မိုက်စ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ကျေးဇူးပါ။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အောက်ဆုံး အဖြူ အမည်းပုံလေးကမှ လှတာ ခိခိ။
အောင် မိုးသူ says: ဂယ်ကျောတာလား…. ခိခိ
uncle gyi says: အဲသည် နှမြောစိတ်ဟာ ပြန်လည်ပူနွေးလာပါတယ်။ ပညာသင်ဖို့ပြောတာလား
အောင် မိုးသူ says: ပညာသင်ဖို့ပါ အန်ကယ်ဂျီးရေး))
Ma Ei says: ကျွန်တော်နဲ့…. …. ဆိုတော့
အောင် မိုးသူ says: ဟီးးးးးးးးးးးးးးးး ဟုတ်လား။
Mike says: .ဂွတ်ဖိုတိုရှော့
Foreign Resident says: ဒူး တော့ မည်းသကွယ် ။
Alinsett @ Maung Thura says: .တော်သေးတယ်…ဖွေးဖွေးနဲ့ မဟုတ်လို့…
Ma Ma says: ပုံလေးတွေ မိုက်တယ်။
ဒါ့ထက် ခေါင်းစဉ်ကို ကြည့်ပြီး ဒညင်ဝက်နဲ့ ဖွေးဖွေး စုံတွဲပုံများ တင်မှာလားလို့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ရေးရင်းနဲ့ စာလုံးတွေ ကျကျန်ခဲ့လို့။
ဒညင်းဝက်လို ဖွေးဖွေးနဲ့ စုံတွဲပုံများ တင်မှာလားလို့ လို့ ရေးချင်တာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: အဝတ် အစား ကြော်ငြာ တာလား၊ ပန်းဆိုင် ကို ကြော်ငြာတာလား ဆိုတာ အခါခါ ပြန်ဖတ်ကြည့် ရတယ်။
တကဲ့ ကြော်ငြာ မှာတော့ မသိ။
ဒီပုံ တွေ မှာတော့ နောက်ခံပန်းတွေ၊ အိတ်တွေ၊ ပန်းအိုးတွေ က ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေတော့ အဝတ်အစား က မှိန် နေတယ်။
kai says: အဲဒီမျက်နှာပေါက်နဲ့.. ဆံပင်အရောင်… ဘယ်လိုမှ..လိုက်တယ်မထင်မိဘူး..။
ဒါပေမယ့်… လာကပ်ထားတဲ့..စတစ်ကာ…လိုလို.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.